Blackview BV5500: imewe, atụmatụ, nkọwa leaked | Gam akporosis
Blackview BV5500, ekwentị na-esote site na ụlọ ọrụ ahụ agbaala ugbu a
Blackview bụ otu n'ime ụdị ndị ama ama ama ama ama ama ama na ụwa kachasị ọhụrụ na 2018. Nwee usoro "BV" siri ike bụ nke nwere akụkọ ihe mere eme siri ike maka ụdị ya, ndị nwere ọmarịcha ewu ewu na ngalaba ahụ.
Oge a, enwere mgbakwunye na-abịa n'ihu na akara ahụ, ọ bụkwa Blackview BV5500, ọnụ nke na-agbakwụnye n'ụdị imewe adịghị mma nke ụdị ndị ọzọ ewu ewu, dị ka BV9000Pro, BV8000, BV70000Pro, n'etiti ndị ọzọ.
Ugbu a Blackview BV5500 ga-agba mbọ iji nweta obi ụfọdụ mara mma imewe na ezi aesthetic elu udidi. Nhazi ọ na-etu ọnụ bụ ume nke ikuku dị n'ahịa ahịa ama ama, ọ ga-abụ ebe ntinye dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na ikpo okwu gam akporo. Nke ahụ bụ n'ihi na akụkụ kachasị pụta ìhè na ya ga-abụrịrị ọnụ ahịa ya.
Ihe dị iche na-amalite na ọdịdị. O siri ike na imewe pụrụ iche bụ isi ihe. Ọ nwere slimmer ergonomic etiti iji mee ka ọ dị mma ma dị mfe ijide ya, ebe ọ na-eme ka ọ slimmer ma e jiri ya tụnyere ngwaọrụ ndị yiri ya.
Banyere ngwaike, BV5500 nwere ngosi ngosi 5.5 nke nwere akụkụ 18: 9. Enwere nchebe Corning Gorilla 3 n'elu, nke na-enye ya ụfọdụ ike. Nzube ya zuru oke dị mma ma ọ na-egosi ụkọ ejiji. N'ụzọ dị otú a, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ga-ahụkwa gị n'anya, ọ bụghị naanị ndị na-arụ ọrụ n'èzí. Ogwe aluminom ọ na-eburu na-agagharị na nsọtụ, nke na-eme ka ngwaọrụ ahụ dị mma ijide.
Ọzọkwa, a ga-eji asambodo IP68, IP69K na MIL-STD-810G mee ya. Ngwaọrụ ga-agụnye igwefoto Sony abụọ nke 13 MP, batrị 4,400 mAh ma gbaa ọsọ gam akporo 8.1 Oreo. Enweghị ozi gbasara nhazi na ebe nchekwa ma. Ma buru n'uche na ngwaọrụ nke nwere ike ịpụta dị ka ama ama ala ụwa dị ọnụ ala dị n'okporo ụzọ. Enweghị ụbọchị maka ntọhapụ BV5500.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Blackview BV5500, ekwentị na-esote site na ụlọ ọrụ ahụ agbaala ugbu a
Ezigbo ekwentị, amaghị m
Zaghachi Paco Bano
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweta ozi Google Play Store akwụsịla na gam akporo
Ndụmọdụ iji chekwaa na ịzụta ekwentị gam akporo